कसरी बनाउन सकिन्छ कम्मर पातलो र सुन्दर शरीर कस्ता कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिएला?? • Health News Nepal
Slim figure female body
आफ्नो पेट र कम्मर सानो बनाउनुछ भने शारीरिक अभ्यास मात्र होइन, आफ्नो खानपानमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । जुन खानामा सुगर, कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यस्तो खाना तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
माेटाेपन घटाउने हाे भने मिठाईलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यस्तै फास्ट फूड पनि तपाईंका लागि शत्रु हुन सक्छ । यसमा उच्च मात्रामा क्यालोरी हुन्छ, जसले गर्दा मोटोपन बढ्छ ।
त्यस्तै रक्सी सेवन त अन्य कारणका लागि पनि हानिकारक छ । रक्सीमा पोषकतत्व हुँदैन तर क्यालोरी भने हुन्छ । तपाईंको तौल कम गर्ने मिसनमा रक्सीले मित्रतापूर्वक सहयोग गर्दैन । त्यस्तै दूग्ध उत्पादनहरूले पनि तपाईको तौल कम गर्ने सपना साकार पार्न सक्दैनन् । यसमा क्याल्सियम त हुन्छ तर कार्बोहाइड्रेटको मात्रा पनि उत्तिकै हुन्छ । जरुरी क्याल्सियम सागसब्जीबाट लिएर दूध पिउन छोड्नुपर्छ ।
फलफूलको जुसमा पनि उच्च मात्रामा सुगर हुन्छ । धेरै जुस पिउनाले शरीरको मोटोपना बढ्न सक्छ ।त्यस्तै नाम नै लिन नहुने अर्को खाना हो आलु । एउटा आलु खानुको मतलब तपाईले एक चम्चा चिनी खाए बराबर हुन सक्छ । स्न्याक फूड पनि तपाईंको शरीरका लागि हानिकारक छ ।
Tags: Diet TipsObesityWellnessWomen's Health
Pingback: कसरी घटाउने मोटोपना ? मोटोपनाले पैदा गर्ने रोग के हुन् ? #Obesity • Health News Nepal